RMP (kwegazi): ukufunda, kulungiswa
Izifo sphere obuseduze cishe njalo nomthelela ongemuhle impilo yonke umzimba. Ikakhulukazi sihlobana isifo, ezithathelwana ngobulili. Ingozi akuyona kuphela ukuthi Ukwelapha ithatha isikhathi esiningi, umzamo nezinzwa, kodwa futhi yokuthi izifo eziningi lesi simo singenzeka uhlelo obuseduze kufihlwe isikhathi eside njalo, cishe ayizange uqobo. Lezi zihlanganisa ukutheleleka ugcunsula ozokusiza ukusungula RMP kwegazi.
Ukunqunywa ukutheleleka ngendlela efanele usaqala
Ugcunsula kuyinto isifo esithathelwana ngobulili, okuyinto idluliselwa avame ngokuhlangana ngokocansi. Nokho, kungenzeka ukungcoliswa ngenxa exchange igazi, isibonelo, ngemva kokusebenzisa insingo abaphikisi noma isipetu non-oyinyumba. Ugcunsula ungathola ingane ngesikhathi sokubeletha noma ngokwemvelo noma amalunga omndeni zisebenzisa izitsha efanayo futhi namashidi abanye.
Ukuze kusenesikhathi sifo kukhona yokuhlola ugcunsula RMP.
Ngemva kokutholakala ibangelwa kakhulu lesi sifo, okuyinto isibe treponema okhanyayo, ezihlobene spirochete ekuxilongweni ugcunsula ekuseni sekulula kakhulu. Sula izimpawu zivele kuphela esigabeni sesibili, lapho isifo isungule kakade emzimbeni. Kusukela ngosuku lokutheleleka ekwakhekeni izilonda ezincane ezithweni zangasese, esibizwa ngokuthi i-chancre, kungase kuthathe izinyanga 3, nakuba eminyakeni ezivamile - 3 amaviki.
Ngaleso sikhathi, babembalwa abantu bangabona amancane, okusheshayo ifindo fudlana akusho ibakhathaze. Nokho, ngemva kwezinyanga 1.5-3 ukuqubuka futhi fever, ogeleza usuka lakhulisiwe zamanzi. Ngisho ngalesi sigaba, akubona bonke abantu baqonde ukuthi kungase ugcunsula, futhi ekuqaleni kungenzeka kuphela ukuxilonga kanye ukuhlolwa igazi phezu RMP ukuphendula microprecipitation noma ukuhlolwa igazi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le chancre kungenziwa yenziwe yaba yasendaweni hhayi kuphela endaweni zangasese, kodwa futhi phezu mucosa ngomlomo. Kube wayevame ukuthi aphanjaniswe canker futhi uqale ukwelashwa yalutho. Phakathi naleso sikhathi, lesi sifo siba nokuguquguquka.
Uma ufuna ukuba bahlolelwe?
Kwezinye izimo, le HLR (ukuhlolwa igazi) kuyinto ukuqaphela kudingekile kuthathwe ukuvimbela ukutheleleka abanye abantu:
ngaphambi kokuya esibhedlela esibhedlela noma ukuhlinzwa eziphuthumayo;
ngaphambi blood donation ku ngezinhloso donor;
lapho ufuna umsebenzi, ukuhlinzeka oxhumana yasendlini ngokushesha kwabantu, lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi imisebenzi ezidinga yokubhalisa izincwadi zezempilo;
ngempela adinga ukuhlaziywa igazi ugcunsula abesifazane walowo obeletha kanti ukuhlaziywa Kwenziwa ngokuphindaphindiwe;
Abantu abaye zabhekana ukwelashwa ekuguleni ezingemnandi, ngokulahlekelwa reanalysis izikhathi eziningana ngemva beqeda imfundo ethatha;
ukubonakala izimpawu nobuntu kuhlanganise ugcunsula - isizathu eziqondile ngokushesha ukuqinisekisa uphethwe.
Qedela igazi ukubala RMP - kuyini?
Uhlaziyo kusekelwe kwencazelo isigaba omzimba dalwa ngezinsuku 7 ngemva kokumiswa kwale chancre, okungukuthi, kuba ulwazi ekuqaleni kwalesi sifo. Yiqiniso, ukucacisa khona lesi sifo futhi ukudlulisa igazi Wasserman (PB), kodwa le ndlela zasungulwa emazweni ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. RMP kuyinto yesimanje kakhulu futhi kunembile.
Kanjani ukuthola ukuthi kufanele kube RMP Ukuhlaziya - negative noma positive?
Yikuphi ongabonisa umphumela isifundo?
Qinisekisa uphethwe ngale ndlela kungaba 80% abantu abaphethwe eyinhloko ugcunsula futhi cishe zonke iziguli esigabeni sesibili. Emihle noma emibi, ngokulandelana, kusho abagulako noma cha, okungukuthi, ukuthi kukhona emzimbeni wakhe pallidum. Worth ukukhathazeka lapho RMP ukuhlaziywa omuhle, kanye okungelona iqiniso.
yi okungelona iqiniso
Uma impendulo kuvela ukuthi okungamanga, lokhu kungase kuthinte zifo ezilandelayo:
ubunjalo rheumatoid zesifo - rheumatoid arthritis kanye arthrosis, scleroderma;
izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba - lupus, thyroiditis;
izinkinga kanye nezinso, amalunga omzimba, sifo;
mikoplazmoznaya futhi chlamydia trachomatis;
ezithathelwanayo mononucleosis uhlobo;
scarlet fever, isimungumungwana noma inkukhu Pox;
isigaba esicacile sofuba;
ukusha kwesibindi kohlobo esibangelwa igciwane;
human immunodeficiency virus, MQQ;
izimila ezihilela izicubu igazi uhlelo lymph;
Ngezinye izikhathi umphumela kungenzeka ukuhlanekezela kubangelwa sokukhulelwa ubudala noma ngaphezulu, iminyaka engu-70 adlula embundwini;
Impendulo lakheka ngokubizwa negative zamanga, ezimweni lapho isifo esikhathini bayashintshana ekufukameleni, okuyinto inyanga nengxenye kusukela lushaya lwegciwane emzimbeni, noma uma ukuthuthukiswa sifo sesivele sidlulile e ugcunsula ephakeme.
Indlela ukulungiselela inqubo?
Imigomo ukulethwa RMP ukuhlaziywa kuhambisane izincomo ejwayelekile sekusele igazi nganoma yisiphi uphenyo:
ngokufanele ukuba unikele ngegazi esiswini esingenalutho ekuseni, kodwa kuvunyelwe ukwenza kanjalo nganoma isiphi esinye isikhathi sosuku, uma emva sidlo saba okungenani amahora angu-8;
kuba kakhulu efiselekayo usuku ngaphambi inqubo, ukuthobela imithetho yokudla - ungadli okubabayo, okuthosiwe, ukudla okunamafutha, futhi ikakhulukazi ukugwema ukwenza chylous (okunamafutha) serum, ukuvimba noma ukusonta imiphumela yokuhlaziya;
umsebenzi futhi ezingcono kakhulu zokugwema noma kakhulu nomkhawulo ngayizolo ukulethwa;
Utshwala banqatshelwe ukuba kuthathe izinsuku ezingu-2 ngaphambi igazi izibonelo zalokho;
amahora ama-2 ngaphambi zokukhwabanisa efiselekayo uyeke ukubhema;
Ungakwazi uphuze amanzi ahlanzekile eliqukethe akukho igesi;
ukusetshenziswa kwanoma yiluphi izidakamizwa kungathinta yi yokuhlaziya, Ngakho-ke, uma okuhlukile akunakwenzeka ukuthola, kumelwe azise udokotela;
umkhuhlane, izimo catarrhal futhi ezingalapheki izifo kufanele futhi yaziwe kusengaphambili wezokwelapha.
Khona-ke ungakwazi kalula uqonde okushiwo ukuhlaziya RMP, ngoba idatha, uyokhuluma izinto ezinembile.
Zikhona ezinye izindlela sokunquma isifo?
Uma RMP inika kusabela okuhle okutheni, bese isiqinisekiso yokugcina ukuxilongwe ngempela wachitha eziningi izifundo:
Pha - yokwenziwa hemagglutination ukuphendula;
RIBT - ukusabela immobilization ukuphaphatheka treponemes.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kucaciswe isiphelo sesimiso ukuhlaziywa ngokuvamile iqondiswa kuya HLR kusukela cerebrospinal fluid, izindlala zamanzi engeyokuqala aspirate, nokususa noma smear abanesikhumba zangasese.
Ngoba noma yisiphi nesenzakalo esolwa ugcunsula kuyadingeka ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuya kudokotela ukuze uthole ukudlulisela ngegazi ukuhlonza ejenti causative. Eminyakeni eminingi edlule, lesi sifo basakaza kuhlupha isivinini kanye ngokoqobo mows labantu. Kodwa anawo kwezokwelapha zanamuhla inemali eyanele ngaso ukuze ukwelapha lesi sifo unaphakade.
Okokuqala, odokotela basebenzisa imithi elwa namagciwane nge-penicillin izimali. Ukuzwela zale spirochetes izidakamizwa kakhulu, ngakho amathuba zokutakula ezingaphezu kuka yangempela. I ethile kuphela sikhonze abadinga ukwelashwa esibhedlela, ngoba izidakamizwa kuyodingeka ukubeka imijovo njalo ngemva kwamahora 3, ngaphandle uma udokotela.
Isakhiwo sihlanganisa yokwelapha immunomodulatory, amavithamini nezidakamizwa ukuvimbela imiphumela yokwelashwa ngemithi elwa namagciwane - dysbacteriosis yokusetshenziswa pheshana emathunjini bese uhlelo urogenital. Ngemva kweminyaka engu-5, umuntu angase abe nomuzwa engumqemane, uma ihlolwe Ukuphinda njalo angikaze kuboniswe lesi sifo.
Umkhankaso ngo esigabeni wesithathu ugcunsula kunosongo oqondile ekuphileni komuntu, esithinta ingqondo nomgogodla. Ukwehluleka kwenzeka nge speed kahle eliphezulu, ngakho-ke ungakwazi weqa isikhathi lapho ukuba ngibuyele emuva ngingahambi sifo Kusengenzeka. Báqondiswa ngalezo zinto, ukwelashwa kufanele iqalwe kusenesikhathi futhi kuphela kadokotela. manje kuyacaca ukuthi lisho RMP ukuhlaziywa.
Tapeworm Sezinkomo. Khomba, balahle, adingekayo izinyathelo.
Simone Signoret (Simone Signoret): Filmography futhi ukuphila komuntu actress (ifotho)
Baby cap izinaliti. Crochet: ofeleba izinsana